Grand Canyon kan qallamu qabu, kan qarqari isaa bayye dagalfate (kan olii dhabatte) kan kessa isaa immo Colorado River kan United States state Arizona kessatti argamu dha. Kan bayyinan argamu Grand Canyon National Park kessa yoo ta'u, Parkiin kuni parki biyya hunda duraa kan baname dha. Bakka Grand Canyon kana presidantiin America Theodore Roosevelt bayye jallata, akkasumas bayye morkaf ture, innis yerro bayye bineensota qabu fi bakka suni ilallu ni demma turee.
Dhoqqi kuni kan Colorado Riveriin midhafame yoo ta'u, lagi kun channel bara million 6 olii kan kutte yoo ta'u, dheriini isaa 277 miles (446 km) yoo ta'u dherinni dagalee (width)n isaa immo 4 hanga 18 miles (0.4 hanga 24 kilometers) yoo ta'u, dhoqaa gara kessa hanga mile tokko callu (1.6km) ta'u qaba.
Ilalchii Grand Canyon kan yerro duraaf godhame bara 1540t yoo ta'u kunis namicha Spain, Europe irra dhufee kan Garcia Lopez de Cardenas jedhamun ture.
Grand Canyon hanga U.S. Civil War dhumattu hunda bayyinan hin bekkamu ture. Bara 1869t, Major John Wesley Powell kan harka tokko qabu kan "Civil war" kessatti yerro bayyef hojjattef kan fedhii Science fi waan harra argu qabu, laga Colorado irran Grand Canyon irratti ademme ilalcha godhee. Isaa fi namotti isaa wajjin jiraan sagal wajjin ta'e jalqabulle, isaan kessa ja'a qofaat demma xumure. Isaaf namotti isaa wajjin ademman kuni namotta yerro duraaf demma akkana godhani dha. Powellin Sedimentary rock dhoqaa kana kessatti argee "leaves in a great story book" (balla kittaba seena gudda kessa) jedhe wamme. Ture suniin dura bakki suni Native Americansiin qabame ture, isaanis bakka jirenya fi washa bayye dhoqaa suni kessatti ijarani turaan.
View from the North Rim of the Grand Canyon.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Grand_Canyon&oldid=22290" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 7 Bitootessa 2013, sa'aa 18:04 irratti.